Izilwanyana ezifakwe kwi-Ikea eziyilelwe abantwana kubantwana kwiphulo lentlalontle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ikea zokudlala ezinobuqhetseba eziyilelwe abantwana zabantwana
Ikea zokudlala ezinobuqhetseba eziyilelwe abantwana zabantwana njengenxalenye ye Iprojekthi yentlalo ukuqinisekisa ukuba bonke abantwana banethuba lokudlala Ewe, wonke umntu kufuneka abe nelungelo elisisiseko lokuvumela iingcinga zakhe zibaleke kwaye abe ngumntwana. Kuthekani ukuba abantwana bazenzele ezabo izilwanyana ezifakiwe? njengabantwana senze imizobo yazo zonke iintlobo zabalinganiswa abangenangqondo ngamehlo aqobayo kunye nezinye izinto eziphambeneyo eziguqule imizobo yethu imisebenzi eyiyo yobugcisa.
Ikea ngolu hlobo lunomdla iprojekthi yentlalo kuvunyelwe abantwana abavela kwihlabathi liphela banokuthatha inxaxheba kukhuphiswano lokuzoba kwaye ushiye isuntswana lakho loyilo labanye abantwana naphina emhlabeni. Kuyathakazelisa ukubona iprojekthi eyenziweyo kunye nabantwana, into ebone ukukhanya kubulelwe kule nkampani yefanitshala yaseSweden oku kwenzeke.
Kulo ukhuphiswano zonyaka ka-2015 zaziswa mini-amagcisa ezivela kwihlabathi liphela zifumana iitotali Imizobo engama-52.000. Kuzo zonke ezi zindululo zingenisiweyo, ijaji yakhetha ezilishumi ezenziwe ngabantwana abaneminyaka emi-4 ukuya kweli-9 ubudala. Njengoko sibona emfanekisweni imizobo yabantwana iyile kwaye iyatsala.
Kwisilwanyana ngasinye esifakiwe okanye incwadi yabantwana I-IKEA ithengisa ngeenyanga zikaNovemba nangoDisemba, la Isiseko se-IKEA nikela nge- € 1 ukuya Gcina a bantwana y UNICEF. Eli phulo livelise I-88 yezigidi ze-euro ukusukela ngo-2003, kwaye incede ukubonelela ngemfundo esemgangathweni kubantwana abangaphezulu kwezigidi ezili-12 kumazwe angama-46. Isizathu esihle esidibanisa ubuchule bamagcisa amancinci kunye noyilo lomkhankaso ofuna ukuba nentlalontle kuneshishini elilula.
«Umhlaba ugcwele amagcisa amancinci. Kwixesha elizayo asiyi kufutshane namagcisa okanye abayili; eminye imizobo yinyani yobugcisa. Ukhuphiswano luvumela abantwana ukuba bayile kwaye bayile isilwanyana esistixiweyo samaphupha abo, esikhuthaza ukucinga kwabo kwaye sikhulise ubuchule babo bobugcisa ». UBodil Fritjofsson (umphuhlisi wemveliso ye-IKEA naBantwana) ».
Soloko a iprojekthi yentlalo Inemvakalelo kuye wonke umntu kwaye ngakumbi xa iqhutywa ngabantwana nasebantwaneni, ebavumela ukuba bathathe inxaxheba kwaye babe yinxalenye yale projekthi iyalinga umntwana, kuba ukuba sicinga ngayo Nguwuphi umntwana ongafuniyo ukwenza ezabo iithoyi? sonke ngesenze into enye naba bantwana, siyeke iingcinga zethu zibaleke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ikea zokudlala ezinobuqhetseba eziyilelwe abantwana zabantwana